ပဲ့တင်သံ Smartpen: ရိုက်ယူပါ။ ပြန်ဖွင့်ပါ။ ပို့ပါ | Martech Zone
ပဲ့တင်သံ Smartpen: ရိုက်ယူပါ။ ပြန်ဖွင့်ပါ။ ပို့ပါ
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 17, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အရာတစ်ခုမှာဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သေချာသည် ... gadget ကို geeks နှစ်ခုအကြားမည်သည့်အစည်းအဝေးမဆိုဝယ်ယူခံရပိုပြီး gadget ကရလဒ်များ! Erin Sparks ကသူ့ Echo Smartpen အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါငါထွက်သွားတယ်။ Erin တစ်ခုအလုပ်လုပ်သည် Indianapolis SEO ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံမှုအနည်းငယ်သာတက်ရောက်သည်။ ငါမှတ်စုရေးချင်သည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါတို့ပြောသောအရာကိုမေ့သောအခါနောက်မှသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုတောင်းရန်လိုသောလူဟောင်းများထဲမှကျွန်ုပ်သည်
ဒါကြောင့်အခုငါမှတ်စုများယူပါ။ သို့သော်ယနေ့အချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံများ၏အစည်းအဝေးသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းသည်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာလေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့မှာတချို့ရှိတယ် 8 GB Echo Smartpens ကိုအသက်သွင်းပါ ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စက်တစ်ခုပါ။
Echo Smartpens ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော်လည်း Sky သည် ပို၍ အေးသည်။ သင်၏မှတ်စုများနှင့်အသံကို Wifi မှတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်မှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မှတ်စုများပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ငါဟာစာရွက်စာတမ်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာသူငယ်ချင်းတွေသိပေမယ့်အိုင်ပက်ဒ်ကိုဆွဲထုတ်တာဟာဟန်ဆောင်ပြီးစကားပြောတာကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ iPad, apps တွေကြားမှာခုန်ကျော်ရတာထက်စာရင်ဘောပင်နဲ့စက္ကူနဲ့ရေးဆွဲရတာပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ အိုင်ပက်ဒ်တွင်မှတ်စုယူခြင်းနှင့်အသံကိုထပ်တူပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်အတော်လေးကောင်းစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မည် (ထိုတွင်တစ်ခုရှိပါသလား) ။ ဒါပေမယ့်စာသားအပိုင်းကိုညွှန်ပြရုံနှင့်အသံအပိုင်းသို့တိုက်ရိုက်ခုန်နိုင်ရုံမျှဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
အပလီကေးရှင်းများရရှိနိုင်ပါသည် Smartpen အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ရန်။
Tags: ပဲ့တင်သံမင်္ဂလာပါsite မဟာဗျူဟာpen
ဒေတာ Big လှုပ်ရှားမှုထိုးထွင်းသိမြင်မှုသို့အသွင်ပြောင်း
Como: Code မပါသည့် Mobile App တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ
17:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 59
Erin သည်သူ၏ Livescribe ကိုနှစ်သက်သည်။ သူကသူတို့ကိုအများကြီးအကြံပြုတယ်၊ သူတို့ကပွဲအတွက်စပွန်ဆာဖြစ်သင့်တယ်။
17:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 27
21:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 30
ငါတကယ်ဒီသုံးနိုင်သည် !! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!!